Uyenza njani iVidiyo yokuSabela kwiYouTube yakho? -YTpals
Uyenza njani iVidiyo yokuSabela kwiYouTube yakho?
I-YouTube lelinye lawona maqonga asasazwayo asasazekayo emhlabeni kwaye ngoku uqhayisa ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-2. Oku kuthetha ukuba i-1/3 yehlabathi ingena kwiqonga inyanga nenyanga ukujonga nje into entsha okanye ehamba phambili. Oku kuyenza ibe sisibonelelo esihle nakubani na ojonge ukukhula kubukho kwi-Intanethi.
Iividiyo zokuphendula yindlela entsha. Abantu basabela kwizinto ezintsha kwaye babambe iingcinga zabo zokuqala baphile. Le yindlela entle kwaye ethembekileyo yokwenza iividiyo ezakha ukuthembana phakathi kwabantu.
Nantsi indlela onokwenza ngayo nayo
Khetha isihloko esithandwayo
Rhoqo ngenyanga okanye ngeveki kukho into ehamba phambili okanye edumileyo. Yenza iividiyo zakho zokuphendula ukuze abantu bakwazi ukuzazi. Ngale ndlela uqhubeka ufumana umxholo omtsha ukuba usabele kwaye wenze iividiyo kwaye abantu banokunxibelelana ngokulula nayo.
Izinto zinokwahluka kwizihloko eziqhelekileyo kunye nezinye i-YouTubers ukuya kumculo okanye kwizihloko zentlalo nazo.
Buza abaphulaphuli bakho ukuba bafuna ukubona ntoni kwaye ungayihoya loo nto. Ngale ndlela ungayifumana i-niche yakho kwaye unxibelelane nabaphulaphuli abafanelekileyo.
Gcina irekhodi yazo zonke iikhowudi zexesha kwividiyo yakho. Xa uhlela ividiyo ikunceda ubeke impendulo yakho kumzuzu ngqo xa usabele kwividiyo. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuvumelanisa ezi vidiyo zimbini ngendlela ejongeka ngathi usabela kwangalo mzuzu.
Oku kunceda ukuzisa ubunyani kwiividiyo zakho kwaye abantu baya kukuthanda ngokuba ngumntu wokwenene. Bhala amagama ambalwa okuqala okanye kwenzeka ntoni kwaye umake uphawu lwexesha lakho levidiyo kumhleli wevidiyo.
Gwema amabango okushicilela
Enye indlela efanelekileyo yokuphepha amabango okushicilela kukungayibeki yonke ividiyo xa usabela kuyo. Faka kuphela iibits ezifanelekileyo ukuze ialgorithm yeYouTube ingakubeki phantsi. Misa ividiyo nge-20 ukuya kwi-30 kwaye uthethe ngayo.
Ngale ndlela unika impendulo yakho yokwenyani ngaphandle kweengcinga kwaye wonwabe. Khumbula ezi vidiyo zenzelwe ukonwaba kwaye akufuneki zithathwe ngokungathí sina ngaphandle kokuba isihloko sifuna njalo.
Kuba uya kube uthetha ixesha elininzi kukunomdla wokufumana imakrofoni ukurekhoda ilizwi lakho. Oku akufuneki ukuba ibe yimic ebizayo kwelinye icala zininzi iindlela ezinokukhethwa kumaxabiso kule mihla nakweli xesha.
Abantu bayakuthathela ingqalelo umgangatho weaudio njengoko kufanelekile ukuba bakuve xa usabela. Isandi esifanelekileyo sisinyanzelo. I-Rode okanye i-Shure mics kufuneka ibe lukhetho lwakho lokuqala kodwa ukuba loo nto ayiphumeli kuhlahlo-lwabiwo mali imicrosoft yaseTshayina evela eAmazon iya kwenza iqhinga nayo.
Xa abantu bebukele iividiyo zakho banokuzibona iindawo ezikungqongileyo. Kuya kufuneka ube nendawo ecocekileyo ukuze xa usesikrinini kungabikho ziphazamiso.
Uninzi lweeTubers ngoku lukhethe izibane ze-LED ezinesimo sokuthomalalisa ngokubanzi. Ungangxola ngokukhanyisa de ufumane into oyithandayo kunye ne-vibe nayo. Imichilo ye-LED sele ithandwa kakhulu phakathi kwabantu kwaye izizukulwana ezincinci zibonakala ngathi ziyabathanda kakhulu.
Thina kwii-YTpals sinikela ngentengiso ye-YouTube, ukudala umxholo, kunye nezisombululo zokuthengisa ividiyo kubantu abafuna ukukhulisa iziteshi zabo ze-YouTube. Sineminyaka yamava phantsi kwebhanti lethu kwaye siya konwaba ngakumbi ukukunceda ufikelele kwinqanaba eliphezulu lesitishi sakho. Iingcali zethu ziya kukukhokela kwaye uya kufumana ijelo le-YouTube elinodumo kunye negama.
Uyenza njani iVidiyo yokuSabela kwiYouTube yakho? ngababhali beYTpals, 27 Agasti 2021
Iindlela ezi-3 zokunyusa ababhalisi beYouTube kunye neMibono usebenzisa iTwitter-Into ekufuneka uyazi
Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-321 kwiqonga ngokwalo, i-Twitter ikhule ngamanani amangalisayo kule minyaka imbalwa idlulileyo iyodwa. Ngelixa yonke i-tweet inokulinganiselwa kuphela kubalinganiswa abangama-280,…
Kutheni yonke into ethengisa ukuThengisa ifuna uBukho beYouTube ngo-2021?
Nokuba uqhuba luphi uhlobo lweshishini, unokuxhamla kubukho beYouTube kumaxesha anamhlanje. Uya kuba sisidenge ukuba ungasebenzisi amandla entengiso yevidiyo kwintengiso yakho nge…